Nezvedu - Dalian Refine Tech Co., Ltd.
Dalian Refine Tech Co, Ltd.rimwe remapoka ehunyanzvi akasarudzika ekuburitsa kunze kweinorema basa maturu maturu emakore gumi nemashanu. Kutanga neR & D uye Kugadzirwa kweiyo yakatwasuka lathe muna 2006, uye akawedzera bhizinesi chiyero chekujaira kumusika shanduko uye kusangana nezvimwe zvevatengi zvinodiwa muna 2010, yakagadzira CNC lathe, yakajairwa lathe, machining nzvimbo, inofinha uye yekugaya muchina, giya hob hob muchina uye radial drillin muchina… ayo anoshandiswa zvakanyanya muminda yeMetal Processing Service.
Zvakare, isu tinopawo zvigadzirwa zvemuchina zvigadzirwa zve peturu, marine, makemikari, gasi mabhizinesi emakambani epakati kumabvazuva nyika kubva ku2018.chimakanika chisimbiso chakawanikwa chitupa che iso & american-api spec q1 & france-bv & eu ce ( md + lvd). iyo michina chisimbiso fekitori yakavambwa muna 1988 uye tarisa pakuvhara indasitiri kwemakore makumi matatu.
Dalian Refine Tech Co. Tichitarisa kune ramangwana, isu tichaomerera kune indasitiri budiriro seyinotungamira nzira yekusimudzira, uye kuramba tichisimbisa tekinoroji hunyanzvi, manejimendi hunyanzvi uye kushambadzira hunyanzvi sehwaro hweiyo sisitimu, uye shingairira kuve mutungamiri mumunda wekugadzirisa simbi. uye zvemaziso chisimbiso chikumbiro mhinduro.
Kubvira payakagadzwa, kambani yakapa inoshanda uye yakakwana rutsigiro rwehunyanzvi kumatunhu ese epasirose yekugadzira indasitiri. Mune michina yekugadzira michina yemainjiniya, kuvaka ngarava, zvemagetsi indasitiri, indasitiri yeforoma nedzimwe nzvimbo, kune vazhinji vashandisi kupa inoshanda kugadzirisa mhinduro, kubatsira vashandisi kunyatso kugadzirisa mhando uye mutengo wemakwikwi, kunyatso kudzora mutengo wevashandisi, kuwedzera iwo mabhenefiti asi torawo kurumbidzwa kwevatengi.
Kukosha kwedu ndiko "HAKUNA HUNHU, HAKUNA ZVAKAITIKA". Kuvandudza mhando yezvigadzirwa zvedu kuwedzera mukurumbira wekambani.
Chiitiko:makore anopfuura makumi maviri emuchina wekugadzira michina uye makore gumi nemashanu ezvekutengesa kune dzimwe nyika ruzivo.
Machine chishandiso sarudzo: Kurudzira zvishandiso zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi, uye zvine musoro kuronga hurongwa hwechigadzirwa kudzivirira kuwanda kwemabasa ekugadzirisa.
Chitupa: ISO9001, CE, SGS, AMERICAN-API SPEC Q1, FRANCE-BV, EU CE (MD + LVD).
Ipa rutsigiro: kupa ruzivo rwehunyanzvi uye rutsigiro rwehunyanzvi hwekudzidzisa nguva dzose.
Unhu Guarantee: Inouya zvinhu kudzora, maitiro ekutarisa kudzora, kubuda kweyedzo kutonga